India: Mitohy ny Fifandirana Manodidina ilay Toby Nokleary Kudankulam · Global Voices teny Malagasy
India: Mitohy ny Fifandirana Manodidina ilay Toby Nokleary Kudankulam	Voadika ny 23 Oktobra 2012 3:21 GMT
Zarao: Tao anatin'ny hetsi-panoherana (jereo ny lahatsoratra Global Voices) no nanombohan'ny tetikasa Angovo Atomika ao Koodankulam, ao Tirunelveli, distrikan'ny firenena Indiana Atsimo,Tamil Nadu tamin'ny volana lasa teo. Nanomboka namokatra herinaratra ny orinasa saingy miharatsy hatrany ny toe-draharaha satria mbola mitohy ny fisamborana olona ary mbola maro ireo mpanao fihetsiketsehana any am-ponja. Nanamarika ny antso ho amin'ny hetsi-panoherana mandritra ny dimy ambiniflo andro manerana an'i India ity herinandro ity ho firaisankina amin'ny tolom-bahoaka manohitra ilay toby nokleary.
Tamin'ny Alahady 14 Oktobra, namoaka fanambarana ny Manda Revolisionera Demokratika fa miampanga ny fanagadrana tsy ara-drariny sy ny fisamborana ireo mpikambana Indiana ao amin'ny ekipa mpanao famotorona momba ny orinasa nokleary ao Koodankulam, ao Tamil Nadu. Notànana tao Nanguneri, 20 km miala ao Koodankulam ireo ekipa tamin'ny 12 Oktobra, noho ny “famoriam-bahoaka tsy ara-dalàna”. Andro maro nitazonana azy ireo taty aoriana, noenjehan'ny polisy tamin'ny sehatra samihafa momba ny Lalàn'ny Onitra sy ny Fandikan-dalàna izy ireo. Noentina tany amin'ny fonjan'i Palayamkottai avy eo ireo mpikambana.
Araka ny filazan'i Sanhati:
Tamin'ny Alahady ihany, naneho ny fanohanana ny vahoaka ny Antoko Sosialista Janata (Demokratika) ao Keralaagitating ho fanoherana ny tetikasa nokleary ao Koodankulam, ao Tamil Nadu.
Mbola any am-ponja ireo vehivavy nanao fihetsiketsehana. Anitha S. nanoratra momba azy ireo tamin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe ‘Vehivavy ao Koodankulam any am-ponja: Lazao ny tsirairay fa mbola eo foana izahay!:
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraLakshmi Sarah
Tantaran'ny Azia Atsimo farany 6 ora izayBangladeshMety Ho An'ireo Fiteny Rehetra Any Azia Atsimo Ny Rindrambaiko OCR (Optical Character Recognition) An'ny Google
Vakio amin'ny teny Swahili, 日本語, বাংলা, Español, English